Nbudata Agusta Westland EH101 v2 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 34 895
Microsoft, v2 site David Robles
Naanị dakọtara na FSX Acceleration ma ọ bụ P3D ruru v3. Helikopta zuru ezu nke anaghị emegide EH101 ndabara FSX-Abụ.
The EH101 bụ otu n'ime ndị kasị mma helicopters na ụwa, ma Microsoft adịghị etinye mgbalị na nke a nlereanya na-efu a otutu. The helikopta e reworked-eme ka ọ dị ka nso ka ike ata ụwa.
* Echefukwala itinye mmanụ ụgbọala na atọ tankị
ortherwise helikopta uche Nott amalite *
Onweghi ihe ndozi iri na asaa na nke a add-on. Nke a bụ ndepụta:
1. Reworked na ugbo elu nhazi ụgbọ elu Ọnọdụ ime ka iku ndị engine surging na-adị na ndabara ugbo elu.
2. Reworked ikuku file ime ka ugbo elu aka ọzọ n'ezie.
3. Kwukwara a di na nwunye nke ọdịda ọkụ na n'azụ struts ịchọta na Asian na SOP rụọ nke ugbo elu.
4. Kwukwara okpomọkụ na iyuzucha mmetụta na-atọ nile engines.
5. Kwukwara ọhụrụ reflective strobes na-amụba okpukpu abụọ flash anya ahu nke ugbo elu.
6. Kwukwara abụọ na-arụ ọrụ radars nke ga-soro ugbo elu. 1st ndị Ini ekededi Rada ka nsuso n'ihi na ugbo elu naanị. 2nd ndị Co-Ini ekededi Rada ka nsuso n'ihi na ọdụ ụgbọelu, ala uka teren na-esonụ, ugbo elu, NDB si, vor si, ọdụ ID
7. Kwukwara Rada njikwa maka ma na usoro n'ime VC.
8. Kwukwara mfe ọgụgụ MFD na PFD hụ na i meziri
9. N'ịbụ engine na-agụ gauges ka ala dị larịị
10.Added Okpu Agha Mount Display (HMD ma ọ bụ HmountD) na òké clickable switches na groundspeed nke ga na-agụ na-adịghị mma (laa azu) ụgbọ elu na useable ngụ oge.
11.Added redio (Ndi an-Extra 300)
12.Added gbapụta GPS
13.Added gbapụta ụzọ akara nlele, n'ihi na ohere ngwangwa ka ugbo elu.
14.Added gbapụta agbanye ọkụ.
15.Added ịgbanwee-enwe ike olu n'ala mbọhọ ịdọ aka ná ntị usoro ọkụ na nche, rotor ala / elu na nche, n'okpuru e ji ebu ihe, mụrụ anya elu na nche
16.Added auto-Hover nlele.
17.Added mmapụta Rada akara maka ala track usoro
Vidiyo nke EH101 na ndabara site na FSX Ntuchapu:
Onye edemede: Microsoft, v2 nke David Robles